राम्रो किताबको मुल्य हुँदैन - साहित्य - साप्ताहिक
राम्रो किताबको मुल्य हुँदैन
अरुण बुढाथोकी कवि, पत्रकार तथा लेखक हुन् । इङ्ल्याण्डको विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स डिग्री गरेका बुढाथोकीका पुस्तकहरु प्रकाशित छन् । उनीसँग गरिएको कुराकानी :
कुन पुस्तक पढिरहनु भएको छ ?
अहिले म टोनी मोरिसन (Toni Morrison) को Song of Solomon पढिरहेछु ।
कस्ता खाले पुस्तक पढ्न मनपर्छ ?
मलाई प्राय: (surrealism) आधारित पुस्तकहरू मनपर्छ । क्राइम, मिस्ट्री, राजनीति र (sci-fi) पुस्तकहरु मनपर्छ । मेरो लागी कविता संकलनहरू एकदम प्रिय छन् ।
पुस्तक केका लागि पढ्नु हुन्छ ? ज्ञान, मनोरन्जन ?
म लेख्ने भएकोले ज्ञानको लागी पढ्छु ।
तपाईका प्रिय लेखकहरु ?
मेरो प्रिय लेखकहरु Sylvia Plath, Haruki Murakami हुन् ।
तपाईंलाइ मन परेका पुस्तकहरु ?
मलाई मन परेका पुस्तकहरु सील्भीया प्लाथको Collected Poems , टोनी मोरिसनको Beloved, र हारूकी मुराकामीको काफ्का ओन द शोर Kafka on the Shore हो ।
अरुलाइ कुन पुस्तक पढ्न सल्लाह दिनुहुन्छ ?
मैले माथी उल्लेख गरेको पुस्तकहरु अरुलाई सल्लाह दिन्छु ।
पुस्तकमा कत्तिको लगानि गर्नुहुन्छ ?
हरेक बर्ष म पुस्तक किन्छु । मैले यो बर्ष १ सय डलर ई-बुकमा लगानी गरेको छु । र, ५, ००० पुस्तकहरुमा गरेको छु । मेरो विचारमा एउटा राम्रो किताबको मुल्य हुन्न । हरेक बर्ष म नयाँ पुस्तकहरुमा लगानी गर्छु । र, यती भनेर छुट्टाउनन् । मलाई लाग्छ किनेको पुस्तकहरु पढिसकेर मात्रा नयाँ किन्नू राम्रो हुन्छ ।
पुस्तक किन्दा कुन आधारमा छनौट गर्नुहुन्छ ?
म प्राय : मेरो मनपर्ने लेखकहरुको पुस्तक पढ्छु । र, अरु बेला राम्रो समिक्षा गरिएका र अन्तराष्ट्रिय पुररस्कार पाएका पुस्तकहरु पढ्छु । मैले कविता संग्रहहरू धेरै पढेको छु । र, उपन्यासमा म भाषाको गहिराइ, विषयवस्तु र सररेलिस्ममा (surrealism) आधारित छनौट गर्छु ।
प्रकाशित :पुस २८, २०७३
सबै कुरालाई पैसासँग साट्नु हुँदैन
जाँच राम्रो होस् भन्ने कामना
गर्मीमा के राम्रो के नराम्रो
महिनावारीमा धेरै पेट दुख्ने केटीको शिशु हुँदैन
दिल्लीको त्यो भेट फाल्गुन २७, २०७४